LGBT ကို ဆန့် ကျင်တဲ့ Feminist က တစ်ကယ်ပဲ Feminist တစ်ယောက်လား | YANGON LITERARY MAGAZINE
LGBT ကို ဆန့် ကျင်တဲ့ Feminist က တစ်ကယ်ပဲ Feminist တစ်ယောက်လား
Posted on June 22, 2016 by Kcmmaung	Leaveacomment
တစ်ကယ်တမ်းတော့ သူက Feminist တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး ဘာလို့ လဲဆိုရင် သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ LGBT ထဲမှာလည်း မိန်းမတွေ ပါဝင်ပါတယ်
Feminism ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က လိင်တွေ အားလုံးအတွက် လူမှုရေးအရ နိုင်ငံရေးအရ နဲ့စီးပွားရေးအရမှာပါ တန်းတူ ညီတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိဖို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် လူမျိုး ဘာသာ လိင် မခွဲခြား ဆက်ဆံဖို့ ကလည်း တတိယအကြိမ် Feminism တိုက်ခတ်ပွဲမှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုလိုခြင်းက အမျိုးသမီးတွေ အားလုံးအတွက် တန်းတူ ညီတူညီမျှ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိဖို့ ကိုပဲ ဆိုလိုပါတယ် အဲ့ဒီ့တော့ LGBT ကို ထောက်ပံ့မှု မပေးဘူး ဆိုလို့ ရရှိရင် တစ်ခြား လိင်တူကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးများ (lesbian) လိင်နှစ်ခုလုံး ကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးများ (Bisexual) နဲ့လိင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်း တစ်ခြားသူတွေနဲ့ အတူ တန်းတူ အခွင့်အရေးတွေ မရရှိသင့်ဘူးလို့ပြောဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲ အဲ့ဒီ့လို အမျိုးသမီးတွေကလည်း ယောက်ျားတွေထက် နိမ့်ကျရုံတင်မဟုတ်ပဲ အားလုံးထက် အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျတဲ့ သူတွေပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ
အခြား အမျိုးသမီးတွေကို ဖိနှိပ် ခွဲခြား ဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Feminist တစ်ယေက်လို့မပြောဆိုသင့်ပါဘူး ဘာလို့ ဆို Feminism ရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ကွဲပြားခြားနားနေလို့ ပါ
Feminist တစ်ယောက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀န်ခံလိုက်တာနဲ့လူတွေ အားလုံးက တန်းတူ ညီတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရသင့်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါပဲ
လိင်ပြောင်းလဲ ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်း Feminism ထဲမှာ များသောအားဖြင့် ပြစ်ပါယ်တာ ခံကြရပါတယ် အဓိက အကြောင်းအရင်းကလည်း သူတို့ တွေက အမျိုးသမီး အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဆိုကြပါတယ် အဲ့ဒါက လုံးဝကို မဖြစ်သင့်တဲ့ မသင့်တော်တဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ
လိင်အင်္ဂါဆိုတာက မွေးကတည်းက ပါလာခဲ့တာပါ ယောက်ျား မိန်းမဆိုပြီး ခွဲခြားလိုက်တာက လောကကြီးမှာ နေထိုင်နေတဲ့ လူသားတွေပါ တစ်ကယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်က သူတို့ ကိုယ်ကို သူတို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါဆိုပြီး သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကပါ သူ့ ကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိုိ့သတ်မှတ်ပေးရပါမယ် တစ်ကယ်တမ်းဆို သူက ပိုပြီးတော့တောင် လေစားဆရာကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ ဘာလို့ ဆိုရင် တစ်ခြား “Feminist” တွေက အားလုံးအတွက် တိုက်ပွဲ မ၀င်ရဲတဲ့အခါမှာ သူက တိုက်ပွဲကို ၀င်ဆင်နွဲနေလို့ ပါ
ထပ်ပြီးတော့ ကျွန်မ ပြောပါရစေ Feminist တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာက အမျိုးသမီး အားလုံးကို ပံ့ပိုးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ့တော့ LGBT ကို မပံ့ပိုးနိုင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို Feminist တစ်ယောက်လို့မခေါ်ပါနဲ့အာရှတိုက် အမျိုးသမီးကိုပဲ ပံ့ပိုးမယ်ဆိုပြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး လူဖြူမကိုမှ ပံ့ပိုးမယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး မိန်းမတွေ အားလုံးကို ပံ့ပိုးမှသာ Feminist တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်
Runaway_bride မှ ရေးသားထားပါသည်။ သူမသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးတိုင်း ညီတူညီမျှ ရရှိရေးကို လိုလားသူဖြစ်ပြီး LGBT ကိုလည်း ပံ့ပိုးသော Feminist တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.facebook.com/feminisminmyanmar တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
Photo credit; Libertad by Denise Coronel
Tags: culture, essay, feminism, literature, myanmar, people, writing. Bookmark the permalink.
Previous post ← Life:aphoto series
Next post The Shadow ofaShiver →